Tolotra amin'ny vatan-jaza tsy manenika, tsy misy takela-by mipetaka, Whiteboard haingon-trano avy amin'ny mpanamboatra an'i China
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Business Type:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:11% - 20% Certs:ISO9001, RoHS, Test Report Description:Whiteboard tsy Magnetika,Tsy mipetaka whiteboard,Tsy misy kitapo mifangaro,Fihaingoana fotsy,Rindrina misy rindrina mipetaka,
Home > Products > Whiteboards Receptive Whiteboards > Tsy mipetaka whiteboard
Ny vokatra avy amin'ny Tsy mipetaka whiteboard , mpanofana manokana avy any Shina, Whiteboard tsy Magnetika , Tsy mipetaka whiteboard mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Tsy misy kitapo mifangaro R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Solaitrabe na Kitapo marevaka matevina
1800 * 1200mm Black School Solaitrabe fanesorana solaitrabe
2400 * 1200mm Standard Size solaitrabe solaitrabe
1200 * 900mm kafe Shopping Blackboard Design To Restaurant
1500 * 900mm Orinasa fiarovana Blackboard Designs
1200 * 600mm Portable Tablet Rakotomam-panandevozana
120 x 180 cm 6x4 Fitaovana matevina mamorona
240 * 120cm Cheap Portable Whiteboard Portable
150 * 90cm azo afindrafotra ny tapa-bolamena vy
120 * 90cm tsy misy fanaka PET Paper Whiteboard
Solaitrabe na Kitapo marevaka matevina Kitendry haingam-pandaminana , mora tapahina, mandohalika, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika ho toy ny endrika hafa, manangona toerana malalaka ary mitondra mora foana. Item No.MRWT-NS50 Tsy misy Whiteboard adhesive dia karazam-baravarankely mavesa - danja ,...
Fonosana: 6pcs ao anaty carton
1800 * 1200mm Black School Solaitrabe fanesorana solaitrabe Ny haben'ny entana ity dia 1800mm * 1200mm Tsy misy andriamby Adhesive mora mandray Whiteboard. Tsy misy Whiteboard adhesive dia karazana kitapo marefo , ary asiana kapila, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mitondrà toerana...
2400 * 1200mm Standard Size solaitrabe solaitrabe Ny haben'ny entana ity dia 2400mm * 1200mm Tsy misy andriamby Adhesive mora mandray Whiteboard. Tsy misy Whiteboard adhesive dia karazana kitapo marefo , ary asiana kapila, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mitondrà toerana mora sy...
1200 * 900mm kafe Shopping Blackboard Design To Restaurant Ny haben'ity vokatra ity dia 1200mm * 600mm tsy misy Whiteboard mpanaingo matevina. Tsy misy na inona na inona ny Whiteboard ny adhesive . Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Mora ny manapaka, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra...
1500 * 900mm Orinasa fiarovana Blackboard Designs Ny haben'ity vokatra ity dia 1500mm * 900mm tsy misy Whiteboard mpanaingo matevina . Tsy misy Whiteboard adhesive dia karazana kitapo marefo , ary asiana kapila, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mitondrà toerana mora sy mahavonjy ....
1200 * 600mm Portable Tablet Rakotomam-panandevozana Ny haben'ity vokatra ity dia 1200mm * 600mm tsy misy Whiteboard mpanaingo matevina. Tsy misy na inona na inona ny Whiteboard ny adhesive . Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Mora ny manapaka, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika....
900 * 600mm Dimension kely Black Chalk Writing Board Tsy misy na inona na inona ny Whiteboard ny adhesive . Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Afaka manapaka, manodina, manodinkodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika amin'ny tarehiny. Ny haben'ny vokatra dia 900mm * 600mm. Amin'ny...
Black Dry Erase Marker Decal Board Art. No. BCKP-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam-bozaka maivana , mora tapahina, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo, dia manana fanoratana am-boninahitra izy ary manala ny...
Black Dry Erase Marker Decal Board Art. No. GCKP-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam-bozaka maivana , mora tapahina, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo, dia manana fanoratana am-boninahitra izy ary manala ny...
Sarin'ny ravin-taratasy matevina Article No.YN3701-4-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo, dia manana...
Famaritana amin'ny solaitrabe manafana entona mamono Art. NrNN1390-2-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo,...
Hazo marevaka mavesatra be mibaribary Andininy No.BA6600-1-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo, dia manana...
Betsaka ny moka marefo marefo marefo amin'ny trano Zavatra No. RC0401-4-NS50 Tsy misy na inona na inona ny Whiteboard Adhesive dia karazam -bolo mavesa-danja tsy misy adhesive , mora tapahina, mandohalika, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo...
120 x 180 cm 6x4 Fitaovana matevina mamorona Ity vokatra ity dia 1800 mm * 1200 mm GRWT-NS50 Tsy misy Whiteboard mpanaingo matevina. Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy...
240 * 120 santimetatra lava be lavarangana Io vokatra io dia 2400 mm * 1200 mm GRWT-NS50 tsy misy Whiteboard matevina manafina adhesive. Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika....
Fonosana: 8pcs amin'ny carton
150 * 90cm azo afindrafotra ny tapa-bolamena vy Ity vokatra ity dia 1500mm * 900mm GRWT-NS50 tsy misy Whiteboard matevina mameno hafanana . Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika....
120 * 90cm tsy misy fanaka PET Paper Whiteboard Ity vokatra ity dia 1200mm * 900mm GRWT-NS50 tsy misy Whiteboard matevina mameno hafanana . Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam- bolo vita amin'ny flexibilité tsy misy adhesive , mora tapahina, manify , mivadika, mihosotra, na afaka manamboatra tarehimarika....
Afeno ny maintin'ny fantsom-panala manala ny totozy Item No.MRWT-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam-bozaka maivana , mora tapahina, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo, dia manana fanoratana am-boninahitra izy ary...
Volon'ondry vy eo amin'ny rindrina Art. No. GRWT-NS50 Tsy misy Whiteboard Adhesive dia karazam-bozaka maivana , mora tapahina, manodina, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. Mamonjy toerana ary mitondra mora foana. Toy ny kitapo akanjo, dia manana fanoratana am-boninahitra izy ary manala ny...
Shina Tsy mipetaka whiteboard mpamatsy
Tsy misy ny takelaka adhesive izay vita amin'ny kitapom-bolan'ny PET sy ny vy vita amin'ny vy tsy misy demagnetized, anti-hara. Izy io dia manana fahaiza-mandray mahasoa magnetika. Tsy misy ny takelaka vita amin'ny adhesive izay azo ovaina sy / na soloina rehefa ampiharina amin'ny rindrina misy takelaka misy habe, toy ny vita amin'ny vy vita amin'ny vy.
Whiteboard tsy Magnetika
Tsy misy kitapo mifangaro
Whiteboard fotsy Magnetika
Whiteboard tsy Magnetika Tsy mipetaka whiteboard Tsy misy kitapo mifangaro Fihaingoana fotsy Rindrina misy rindrina mipetaka Whiteboard fotsy Magnetika Whiteboards Magnetika